एमसीसी श्रीलङ्कामा जस्तै सरकारले नो भन्न सक्नुपर्छ : डा के.सी.
10th September, 2021 Fri १०:५१:४३ मा प्रकाशित
डा. सुरेन्द्र केसी
मेरो विचारमा एमसीसीलाई तन्काउनु र फन्काउनु पर्नेमा केही जटिल नै छैन । श्रीलङ्काले जसरी नो भन्दिए पुग्छ । नेताहरु मनपरी गर्ने तर विरोध गर्न नसक्ने नेपाली जनता भेडा हुन् । एउटा विषयलाई लिएर मुुलुक नै दुई कित्तामा बाँडिनु पर्ने, रातोपिरो हुनुपर्ने । लाठीमुङ्
नेपाली जनताको भावना बुझ्ने हो भने एमसीसी कुनै हालतमा पास नगर्नुपर्ने हो । तर, तीनै जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरु त्यहाँ छन् । त्यसैले उनीहरुले जे चाहे त्यहि गर्छन् हामी बोल्नुको के अर्थ हुन्छ ? सार्वभौमसत्ता जनताले योग्य छ भनेर उनीहरुलाई संसद र सरकारमा पठाएका हुन् । यसमा कि त हामीले पहिल्यै तिमिहरु योग्य छैन भन्नु पथ्र्यो । उनीहरुलाई जिताएर पठाउनुहुने थिएन । होइन भने यीनीहरुलाई नै बारम्बार सत्तामा पठाउने अनि राम्रो काम गरेन भनेर आक्रोसित हुनुको के अर्थ छ र ? नेताहरुलाई घेराउ गर्नुपर्नेमा अमेरिकन दुतावास घेर्न जाने, उनीहरुको कार्यकर्ता बोल्नुपर्नेमा आम जनता बोल्नु पर्ने यो सब उल्टो गतिमा मुलुक गइरहेको छ । उनीहरु बोनाफाइट प्रतिनिधि हुन् । नेपाली जनताले उनीहरुलाई त्यहाँ पठाएको हो । भित्रभित्रै अनुचित साँठगाँठ गर्दैनन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो । आम जनताको विश्वास घात गर्छन् भने त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ ।
अफगानिस्थानमा विदेशी सेनाको परेडले कस्तो असर गर्यो त्यो सबैले बुझेकै छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै परिणाम भोग्ने दिन आउन सक्छ । दुष्परिणामको मूल्याङन गर्ने आधिकारिक निकाय हामी होइन । अब उनीहरु नै देशलाई प्रतिकुल हुने काम गर्छन् भने कसलाई दोष दिने ? कि त हामीले प्रतिनिधि बदल्नु सक्नु पर्यो, कि त नियति भोग्नु पर्यो ।
विरोध गरेरमात्र होइन अब आम जनताले आत्मासमिक्षा गर्नुपर्यो । हामीले कस्तालाई जिताएर पाठायौं ? कहाँ भोट हाल्यौं ? भविष्यमा यस्ता दुर्घटना ननिम्ताउन जागरुक र सचेत हुनुको विकल्प छैन । हामीले शत्तापक्षको खबरदारी गर्दै आएको तीस वर्ष भयो तर उनीहरुले हामीमाथि के आरोप लगाए भने यो सबै पद पाउनका लागि हो भन्ने अर्थमा बुझे । चौतर्फि विरोध हुँदा हुँदै पनि एमसीसी संसदबाट पास गरिन्छ भने यसलाई नियति सम्झिनु पर्छ । नियति भोग्दै जानुको कुनै विकल्प छैन । कि सहि प्रतिनिधित्व, कि बुहार्तन खप्नु बाहेक विकल्प छैन ।
मेरो विचारमा एमसीसीलाई तन्काउनु र फन्काउनु पर्नेमा केही जटिल नै छैन । श्रीलङ्काले जसरी नो भन्दिए पुग्छ । नेताहरु मनपरी गर्ने तर विरोध गर्न नसक्ने नेपाली जनता भेडा हुन् । एउटा विषयलाई लिएर मुुलुक नै दुई कित्तामा बाँडिनु पर्ने, रातोपिरो हुनुपर्ने । लाठीमुङ्ग्रो खानुपर्ने यस्तो पनि शासक हुन्छ ? केपी ओली प्रतिगामी भए भनेर अग्रगामी सरकार ल्याएको होइन ? एक महिना नबित्दै सत्ताको उन्माद देखिसक्यो । कसैले कुकर्म गर्छ भने त्यसको फल कहिल्यै सुकर्म हुँदैन । नेपाली जनताले यो बुझ्न आवश्यक छ ।
(डा. के.सी. राजनीतिक विश्लेषक एवं इतिहासविद् हुन्)